Google waxay durba bilawday kaaliyeheeda codka Isbaanish | Ragga Stylish
Kaaliyaha codka ee Google wuxuu yimid Isbaanish
Waxay ahayd waqti uun kahor Kaaliyaha Google, oo ah kaaliyaha codka ee websaydhka ka socda Mountain View nooc isbaanish ah.
Loolanka loogu jiro hoggaaminta adduunka ayaa durbaba taagan. Ku saabsan yahay baaritaanka codka sayidkiisa, mid ka mid ah luqadaha ugu isticmaalka badan, Isbaanish, iyo Google waxay rabaan inay noqdaan, sida had iyo jeer, hogaaminta.
1 Kaaliyaha codka ee kaaliyaha Google
1.1 Abaabulka iyo ajendaha shaqsiyeed
1.2 Fiican waqtiga firaaqada
1.3 Warar maalinle ah
2 Caawiye kaaliyaha Google ee Isbaanishka, kana baxsan Google Pixel
Qalabka kaaliyaha codka Kaaliyaha Google
Abaabulka iyo ajendaha shaqsiyeed
Caawiye kaaliyaha codka Google waa qalab awood u leh maaraynta howlaha maalin kasta, iyada oo loo marayo digniino iyo xusuusin. Si loo qorsheeyo casho ganacsi ama qado, ama si fudud abaabulka howlahayaga caadiga ah, kaaliyaha codka ayaa tilmaamaya xulashooyinka ugu fiican kiis kasta.
Fiican waqtiga firaaqada
Sugitaanka dheer ee waaxaha maamulka, la-tashiga caafimaadka, garoomada diyaaradaha, iwm. Kaaliyaha codka ee Kaaliyaha Google wuxuu u sheegi karaa kaftanka inay bixiyaan ciyaaro badan oo kaladuwan si waqtiga loogu dhaafo, "U sheeg" wararka qaar ama gabay tiri. Waxaa jira fursado badan.
Warar maalinle ah
Haddii aan dooneyno inaan ogaano waxa ku dhacaya kooxda kubbadda cagta ee aan ugu jecel nahay, wararka caalamiga ah, sida saamiyadeennu uga socdaan suuqa saamiyada, ama wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda. Dhammaan raadinta waa la gali doonaa, kaas oo kaaliyaha uu ku baran doono inuu si dhakhso leh noo ogaado oo daqiiqaduna ay imaan doonto goorta "xusuustaada" ayaa noo sheegi doonta waxa aadka noo xiisaynaya.
Caawiye kaaliyaha Google ee Isbaanishka, kana baxsan Google Pixel
Waxaa laga heli karaa Google Allo ee telefoonada Android iyo IOS. Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maahan in kaaliyaha codka Google uu ku shaqeeyo Smartphone kasta. Waxaa ka mid ah shuruudaha ugu yar, mid waa inuu la socdaa Android 6.0 Marshmallow ama ka sareeya, ayaa cusbooneysiiyay adeegyada Google Play, 1,5 RAM iyo xalka ugu yar ee shaashadda ee 720p.
Ilaha sawirka: Fossbytes / Greenbot
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Kaaliyaha codka ee Google wuxuu yimid Isbaanish
Talooyin ku saabsan gadhka xiiran
Daabacaadda moodada ee funaanadaha xagaagan